အောက်က ပို့စ် အသစ် များ သည်..ကိုယ်တိုင် ဖတ်လေ့ ရှိသော စာ တချို့ နှင့် အပြန်အလှန် ခင်မင်ရသော မိတ်ဆွေ များ ၏ စာ တချို့ ဖြစ်သည်။
သူတို့ ရေးတဲ့ အသစ်တွေ
- DW--Myanmar Coup--more than 700 killed, Wai Moe Naing hit by car --warning graphic, Phil Robertson HRW intv. https://www.youtube.com/watch?v=YGuDNNcGAVg
အလငျးနဲ့ အမှောငျ … - ကမ်ဘာကွီးမှာ အခု ဖွဈနတောတှေ အားလုံးဟာ အခြိနျကလြို့ ဖွဈနတေဲ့ အရာတှပေဲလို့ ဆကျစပျတှေးမိလာတယျ ....။ ၂၀၁၂ မှာ ကမ်ဘာပကျြမယျလို့ ကောလဟာလ ပွောခဲ့ကွတာ ကို မှ...
Seminar presentation: “History and Art History in Southeast Asia” Professor Adrian Vickers - New Mandala and the Southeast Asia Institute at The Australian National University are pleased to present this seminar by Professor Adrian Vickers, who i...
Muslim Doah Prayers for Myanmar - In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.Praise be to Allah, The Lord of the Universe,The Possessor of the Day of Judgment.We worship only You an...
Kenneth Wong SF
Politics and the Burmese Language: Puns and Wordplays from Burma's Spring Revolution - Burma Spring Revolution's protest memes and symbols A monk's lacquer-coated alms bowl carried bottom-up at the head ofaprocession, the little roly-poly f...
နတ်ထိ = 2021 - ငွိမျးခမျြးရေးရယျတရားမြှတရေးရယျလှတျလပျရေးရယျရယူနိုငျဖို့ညီညှတျခိုငျမာစှနျ့လှတျမှုတှနေဲ့ အတူရုနျးကနျမယျ။ဒါဟာ… တျောလှနျရေး။ နတ်ထိ၂၀၂၁ ဧပွီ . နတ်ထိ Ebook Seri...
အာဏာရှငျ တျောလှနျတဲ့ လကျသုံးခြောငျး ဂြူနီယာဝငျး - အာဏာရှငျ တျောလှနျတဲ့ လကျသုံးခြောငျး ဂြူနီယာဝငျး အစ The Hunger Games ရုပျရှငျ ထဲက ဇာတျဝငျခနျးတှကေို နညျးနညျး ပွနျပွောဖို့လိုလာပါတယျ။ ဒီကား ဟာ ၂၀၁၂ ခ...
Victory in Burma -
'The Choice Of Next Generation'
HAIL TO THEE - Still people in Burma were in pain of the beating of the pandemic situation, and still not cured enough for their wounds of their heart of losing their lo...
မွနျမာ့ရေးရာ သတငျးပဒသော (၄ ဖဖေျောဝါရီ ၂၀၂၁) - မွနျမာနိုငျငံမှာ အာဏာသိမျးစဈအစိုးရက ဖစျေ့ဘှတျကို ဒီနကေ့စပွီး ဖဖေျောဝါရီ ၇ ၇ကျ‌နအေ့ထိ ပိတျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ - တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့မှု - NLD အမတျတှေ ကိုယ...
ကိုလံဘို ရန်ကုန် - မြို့ကြီးက ညှော်နံ့ထွက်နေပြီနဖူးပေါ်ကချွေးဟာ နဖူးပေါ်မှာပဲ ခြောက်သွားတယ်။ရေဆူမှတ် မရောက်ခင်ငါတို့သွေးတွေ ဆူပွက်တော့မယ်မြစ်ဆုံကြီးခေါင်းပေါ်ကလောင်းချလိုက်ရ ကေ...
Feliz Navidad- Cover - May your heart be filled with joy and sweet, from these moments may bring health, wealth, happiness, peace and prosperity
တခြားသောကမ္ဘာ... - တခါတလေကျတော့ ငြိမ်းဟာ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ် လုံခြုံအောင် ထုတ်ပိုးသိမ်းဆည်းဖို့ မတတ်နိူင်သူပါလားလို့ တွေးမိတဲ့အထိ။ နာကျင်လိုက်တာ၊ ဒဏ်ရာတွေကို ဒီလောက် နှစ်အေ...
ဖရိုလနျးပနျးခွံနှငျ့ နျောဝေးခရီးစဉျ - *ဖရိုလနျးပနျးခွံနှငျ့ နျောဝေးခရီးစဉျ * ကိုဗဈပွီးလို့ ခရီးသှားတာမဟုတျပမေယျ့ ခရီးသှားခှငျ့ပွုလို့ ကိုဗဈအစီအမံတှကွေားထဲကနေ ကြှနျတျောတို့ ဇနီးမောငျနှံ နျောဝေ...
မဇ်ဇိမသို့ ခရီးသှားအတှအေ့ကွုံ တ - ဒီနခေ့ရီးက ခရီးစဉျတလြောကျလုံးမှာ အကွာဆုံးကားစီးရတာပဲဖွဈတယျ။ ဗာရာဏသီကနေ သာဝတ်ထိကို ကိုးနာရီကွာ ညောငျးနအေောငျစီးပရေော့။ ဒါကွောငျ့တခြို့က လူသကျသာအောငျ ဗာရာဏသ...
ရနျကုနျ-ပဲခူးဒသေနှငျ့ ငလငျြအန်တရာယျ- ၂ - *အတိတျငလငျြဖွဈရပျမြား* ရှမေျောဓေါစတေီတျောရငျပွငျ၌ ငှကျပြောဖူးအပိုငျး အဟောငျးတခုကို ထိနျးသိမျးထားသညျ။ ထိုအပိုငျးသညျ သက်ကရာဇျ ၁၂၇၉ ပထမဝါဆိုလဆုတျ ၂ ရကျ (၁၉...
Interview with newspaper on September 11th, 2001 -
New Year Wishes - Tin Moe - "နှစ်သစ်ဆုတောင်း" အမြင်ကျဉ်းမြောင်း၊ စိတ်ကျဉ်းမြောင်၍ တွင်းအောင်ရသည့်ဘဝမှ လွတ်ပါစေ။ စိတ်ဓါတ်သေးနုပ်၊ ညဏ်သေးနုပ်၍ ချုပ်ချယ်မှုအမျိုးမျိုးမှ လွတ်ပါစေ။ တို့ အ...
- *စုပေါင်းအင်အား * ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်မှု (၂) နှစ်ပြည...
" မဟာကရုဏာရှင်"၆ရက် နိုဝင်ဘာ၂၀၇ခုနှစ် ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၆) အမှတ်(၄၃)မှ - မေတ္တာ ကရုဏာ ကြီးမားလှသည့် ထိုင်းဘုရင် ရာမ(၉) ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်ရဲ့ ဈာပန ပြီးဆုံး သွားပြီဖြစ်သည်။ နတ်ရွာစံပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ ပြုလုပ်သည့် ဈာပနအခမ်းအနားမှာြ...
NLD အပေါ် ပြည်ပအမြင်နဲ့လက်တွေ့ (အပိုင်း ၁) - ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲအောင်ပွဲ တနှစ်သက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီနဲ့ အစိုးရအပေါ် နိုင်ငံတကာသုံးသပ်ချက်တွေဟာ တက...
စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ လက်ကိုင်တုတ် - မိုးမခ
- ကျနော် ဒီဘလော့ လေးမှာ မရေးဖြစ်ခဲ့တာ လေးနှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၂၆ ရက် ညပိုင်းမှာ စိတ်ကူးရလို့ ဖွင့်ကြည့်မိလိုက်တော့ အဆင်သင့် ရှိနေသေးတာ တွေ့ရတယ်။ ဒ...
ကဗျာက ထထ အော်တယ် -တောင်လဲပြိုခဲ့ ကမ်းလဲပြိုခဲ့ ရာသီပေါ်သီးနှံတွေလဲရောင်းကောင်းလို့ ဓါတုဗေဒဆေးဝါးမပါတဲ့ သဘာဝစစ်စစ်တွေဖြစ်ရဲ့လား ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားတို့ရဲ့ပီတိ ပကတိအမှန်တရားမ...
Bo ဘိုဘိုလန်းစင် » ရေသာများ၍
တယောက်မှ မကြိုက်ရင် ၂၀ ပေးရတဲ့ အော်ဇီရွေးကောက်ပွဲ - I confirmed that the government of Australia has changed . . . အသံ ခပ်တုန်တုန် နဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ သြစတြေလျ လစ်ဘရယ်ပါတီခေါင်းဆောင် တိုနီအဲဘတ် ရဲ့ မိန့်ခွန...
ရှစ်လေးလုံး NLD နဲ့ ကျွန်တော် - “သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက်”၊ “သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက်”၊ ဆိုတဲ့သံပြိုင်ဟစ်ကြွေးသံတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်အိပ်ယာက နိုးလာခဲ့တာဟာ ၈-၈-၁၉၈၈ မနက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကြ...
ဒီမိုကရေစီ စွမ်းပကား တပ်မတော်အား
Mitch McConnell Urges Myanmar To Reform Constitution - Posted: 07/24/2014 7:32 pm EDT Updated: 07/24/2014 7:59 pm ED WASHINGTON (AP) — Sen. Mitch McConnell issuedastrong call Thursday for Myanmar t...
Moral value and Rule of law - I've been following all the news sources about recent series of violence clash between Buddhists and Muslims in Myanmar, I observed the fact that how indiv...
အနီလား၊ အ၀ါလား၊ အစိမ်းလား - နုနုရည် (အင်းဝ) အပိုင်း - ၈ - အပိုင်း(၈) အမျိုးသမီးလေးက ပြောရင်း ဟို...မချိုသန်းဆိုတဲ့ မိန်းမကို လှမ်းကြည့်တယ်။ မချိုသန်း ခြေထောက်မှာ ခြေဗလာနဲ့။ 'မချိုသန်းနော်....အမြဲတမ်း ဘယ်တော့မှ ဖိ...
အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဒီမိုကရေစီအစဉ်အလာ (၅) - ( ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ အင်္ဂါရပ် တစ်ခုမှ ပုံမှန် ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲ များနှင့် ထို ရွေးကောက်ပွဲ များမှ တဆင့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေ ပြုရေး လုပ်ပိုင်ခွင...
ဒေါက်တာ မောင်မောင် ညို
Thou Art A Hero U Win Tin! - * Thou Art A Hero U Win Tin!* You are gone today at the Yeway Cemetery Surrounded by sad people in mourning ceremony With tears in their eyes and fire in ...
ဒြပ်မဲ့ပုံတူ - သံသရာလမ်းက ဝေးသထက်ဝေး...ဝေးကွာနေမယ် ခန္ဓာစမ်းက သွေးထွက်နှေး...နှေးလာနေတယ် အလေးထားကိုးစားလျှက်ရည်မှန်းထားတဲ့ ကိုယ်မှန်ဝါဒလည်း အားပြတ်ပြီး ပြိုကျပျက်မတတ်မှာတေ...
စိတ်အားထက်သန်သောကျောင်း (အခန်းဆက်ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး) (အပိုင်း-၁) - အခန်း (၁) နိဒါန်း ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေပြီ (၁၉၈၀) မတိုင်မီကာလတွေရဲ့ ကျောင်းသားစီမံခန့်ခွဲမှု သဘောတရားကို ရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ်ပေးမှု အတွေးအခေါ်တွေက ကြီးစိုးထားခဲ...
အမေရိကားမှာ တစ်လတာ - ဂျပန်မှာ အတော်နေသားကျပြီး၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု နဲ့နေထိုင်မှုပုံစံ ကို နှစ်သက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို သွားရောက် ...
ရှစ်လေးလုံးအကြို လူ့ဘောင်သစ်လူငယ် YNS လှုပ်ရှားမှု - ‎(၂၄) နှစ်ပြည့် ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံ အထိမ်းအမှတ် လက်ကမ်းစာစောင်များကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး နှင့် တစ်ခြားသောနယ်မြို့များတွင် ဝေငှြ...
Stop Land Grabbing Now! (A New Form of Colonisation) - တလောတုန်း က မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုက် တခုမှာ … ကျနော်တို့ရဲ့ အိမ်န်ီးချင်း နိူင်ငံ တခုကို ရခိုင်ပြည်နယ် က လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး မြေတွေ နှစ်ရှည် ငှားရမ်း စိုက်ပျိုးခွ...
နွေဥပေါက် - လက်ပံပင်ထိပ်ဖျားမှာ ဥသြဟာဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဇာတ်နာလုို့ နွေဥပေါက် နွေတပြောက်ထုိုးရုံနဲ့ ပလက်ဖောင်းပေါ်ကြိုးလက်ဆွဲပြီး ခွေးကျောင်းထွက်လာတဲ့ နွေဥပေါက် မလု...
ပညာသည် (ခေတ်စမ်းလင်္ကာ) - မိုးစည် - မြန်မာကဗျာလက်ရွေးစင် သတ္တမတန်း မှ တိမ်မှောင်ချည်း၍ မလင်းရောင်ဝါ မှိုင်းအုပ်ကာလျှင် ဘယ်ညာမလပ်၊ လောကဓာတ်သို့ တိုက်ခတ်တုန်ဟီ၊ လေပြင်းချီသော် တွဲလီတွဲလောင်း၊ စာဘူ...
ကံနဲ့ ကံရဲ့ အကျိုး - တကယ်တော့ ကိုယ်ပြုတဲ့ကံက လှည်းဘီးပမာ တကောက်ကောက် လိုက်တယ်ဆိုတာ အဲဒီကံတွေက လိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ရှိပြီး ပျက်၊ ဖြစ်ပြီး ပျက်တတ်တဲ့ သဘောအရ ပျက်သွားတာပါပဲ။ ဒါပေ...
ညီအကိုချင်းပေးစာ ( သို့ ) သံဒုတ်မှ သံခဲသို့ (သို့) သံခဲရေ - မင်းခေါင်းဖြတ် ခံနေရအုံးမယ်၊ ( သံဒုတ် ) - တောခိုတော့မယ်လို့ မိဘတွေကိုပြောတော့ အဆိုးအကောင်း ဘာမှ မပြောကြပါဘူး။ မိဘနှစ်ယောက် စလုံးကို ဦးချကတော့တယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ လမ်းစရိတ်ကို ယူလိုက်တယ်။ အဖေက " တော...
--- မင်းသားကြီး ---
L'E'Tranger သူစိမ်းဆန်ဆန် - ၁၉၅၇ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့နိုဘယ်ဆုရ ပြင်သစ်ဝထ္ထု L'E'tranger ရေးသားသူ - အောင်မျိုး (ပြင်သစ်စကားပြန်ဟောင်း) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
SAVE IRRAWADDY - ပြည်ထောင်စုအမွေအမြဲတည်တံ့စေ အဓိဌန်ပြုပေ ထိမ်းသိမ်းစို့လေ.........*.SAVE IRRAWADDY*
Ye-Mon's Personal Pages
Free at last - Now, I can post on my personal blog without requiring to use proxy servers. Free at last! I hope this will last long. Hello ... again to all my cyber-frien...
Good & Evil - This was just something I saw in my Aunt's blog. It was somewhere on Reader's digest. I loved it because it was completely true and honest and please take ...
မောင်စိန်သောင်းရဲ့ မနှင်းရည် နောက်ဆက်တွဲ - လူကိုယ်တိုင် မသွားရပေမယ့် ... ဓာတ်ပုံတွေ မြင်ရတယ်။ ကိုကျော်သူ့ facebook က ယူပါတယ်။
different kinds of flowers in my garden -
ငါးမရ ရေချိုးပြန်ပါမည် - မောင်လွမ်းဏီ ရွှေဘ ဘယ်သွားလဲ မိလုံး။ ကိုညိုဒင် ငါးမျှားတံများကို အိမ်အဖီဘေးတွင်ထောင်ရင်း မလုံးကို မေးလိုက်သည်။ မလုံးက မကြားဟန်ဖြင့် မီးခိုးအူနေသည့် မီးဖိုက...
ကစားပွဲ - "ကစားပွဲ" ၀င်တိုးမလား လူစုခွဲမလား အင်အားပြမလား အကွက်ရွေ့မှားရင် အစားခံရမယ် ဘ၀ / နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ်။ (ခေလွန်း) ("/" = မျဉ်းစောင်းဟု ဖတ်ပါ)
Mi Mi Khaing
IV EXHILARATIONS OF RELEASE - In December 1932, I sat for the High School Final Examination which also served as selection examination for entrance into the University of Rangoon. I ...
ပြောင်းလဲခြင်း - ယခင် Rubyland ဘလော့ အား ယခု မှစတင်၍ လိပ်စာပြောင်းလိုက်ပါသည်..... http://rubyland.isgreat.org သို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ RubyLand...
Building Knowledge Economies စာတမ်း(၅) - ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စာတမ်းပါ Building Knowledge Economies ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် မူဝါဒတွေကို မူလ...
အိပ်မက်.. အတွေး ... - Blog နဲ့ဝေးနေတာ အတော်ကြာပြီ ။ ကျောင်းစာတွေ ၊ နောက်ဖတ်စရာ စာတွေကြောင့် Blog ရေးတဲ့ဘက်ကို မရောက်ဖြစ်တော့ ။ ခုတော့ တစ်ခုခုတင်မှဖြစ်မယ် (တင်မယ်တင်မယ် နဲ့ ပြေ...
My Burmese Notions
ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျေးဇူးရှင်၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ဖခင်။ (Birthday Tribute to General Aung San) - ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုတာနှင့်၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအမျိုးသားတွေ သတိရမိကြ တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးရှိပါတယ်။ အဲဒါသူကတော့ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ ဗိသုကာ၊ မြ...
cho tu zal
My Emotional Corner
Part Of zeRoTraSh
Poetry Post - poetry post
Burmese Gold Bull's
ကောင်းကင် နိုင်ငံပြု အနုပညာ
Myanmar Story Teller's
ခြံတံခါးလေး ပိတ်ဖို့ အပြင် ထွက်လိုက်တော့..လရောင်က..၀င်းဖြဖြ။ ကောင်းကင် မော့ကြည့်တော့မှ.. လပြည့် ကာနီး ပြီ ဆိုတာ..အသေအချာ သတိ ရ လိုက်သည်။ သီတင်းကျွတ်လပြည့် ပြီ လေ။
လပြည့်တကာ့ လပြည့် တွေထဲ မှာ..သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကို အချစ်ဆုံး။ ရာသီ တကာ့ ရာသီ တွေ ထဲမှာမှ.. သီတင်းကျွတ်လ ရဲ့ ကောင်းကင်ကြီး ကိုက..အကြည်လင်ဆုံး။ ပွဲတော်တကာ့ ၁၂လ ရာသီ ပွဲ တော် တွေ ထဲမှာ ဆိုရင်လည်း.. မီးထွန်း ပွဲ တော်ကို ပဲ..အပျော်ရွှင် ဆုံး။ ဒီ လ ဒီအချိန် တွေက..သူ့ရဲ့ ဆုံမှတ်တွေ.. ဦးတည် သတ်မှတ်ဖို့ အခြင်းအရာတွေ..။ ဒါပေမဲ့..ဒီ တနှစ် လည်း..သူ ချစ်တဲ့ မြေနီနီ ဖုန်ထူထူ သီတင်းကျွတ်လေး ဆီ မပြန် ဖြစ်သေး။
ခုချိန် လောက် ဆိုရင်တော့..သူ့ အမ တွေ..တူ-တူမတွေ တသိုက်ကြီး နဲ့..ဖုန်ထူ သီတင်းကျွတ်လေး ဆီ..ဦးတည်သွား နေ ကြ လောက်ပြီ။ အရင့် အရင် တွေ တုန်းကတော့..သူ လည်း ပါနေကျ ပေါ့။ မြို့တော်ကြီး ဆီ ကနေ.. တနှစ် တခါ ဆိုသလို မျိုးတော့ လူကြီး မိဘ တွေ ဆီ ပြန်လာ ကန်တော့ ဖြစ်ရင်း..အစဉ်အလာ တခုကို.. ကြည်နူးစွာ..ထိန်းသိမ်း ဖြစ် ခဲ့သေးသည် ။ တကယ်ဆို..မြို့တော်ကြီး နဲ့..ခပ်ပြပြ မှာ တည်ရှိနေတဲ့..ဖုန်ထူထု မြို့လေးကို..သူ..သံယောဇဉ် သိပ် မရှိဘူးလို့...ထင်နေခဲ့ မိတာ....မှားနေပြီ ထင်သည်။
ဒီဖုန် ထူ မြို့လေး မှာ..ဘုရားပွဲ တော်ကြီး တခု..အထင် အရှား ရှိပေမဲ့..ဘာမှ မစည်ကားလှ တဲ့ မီးထွန်းပွဲလေး နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်..ဘယ်တုန်းကမှ.. နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် မရှိဖူးခဲ့ဘူး။ ဘုရားပွဲ တော်ရက် တွေ မှာ..ရန်ကုန်မြို့ကြီးက..ဆင်းလာပြီး.. ခန့်ခန့်ကြီး ဧည့်သည်လုပ်တတ်တဲ့ မြို့ကြီးသား တွေ.. အဆိုတော်..မနူးမနပ် တွေကို မျက်စိ နောက်လွန်း လို့.. အိမ်တွင်းပုန်းခဲ့ သမျှ.. သီတင်းကျွတ်ည တွေ ရောက် မှပဲ..အေးအေးချမ်းချမ်း .. လမ်းပေါ် ထွက် ဖြစ် ရတာ လေ..။
ငယ်ငယ်က ဆို.. သီတင်းကျွတ် ကို..ပထမ အစမ်း ပြီး တဲ့ ကျောင်းပိတ်ရက် တခု မို့ ကို ..ပိုပြီး ပျော် ရွှင် တတ် ခဲ့တာ ။ နောက်ဆုံး ဘာသာ ဖြေပြီးတာနဲ့.. အိမ်ကို အပြေးပြန်ပြီး.. ရွှံ တွေခူး ရတယ်။ ရွှံတုံးလေး တလုံး လုံး..လက်ကလေး နဲ့ ပြား..ပြီး- အလယ်ခေါင် ကို..လက်ညှိုးလေး ထိုးပြီး အရာပေး လိုက်ရင်.. ဖယောင်းတိုင် ထဲ့ စိုက် ဖို့..အခံ တုံးလေး တွေ ရပြီပေါ့။ ဖေဖေက.. ၀ါး ခွေလေး တွေ နဲ့ မီးပုံး တွေ ချိုးပေး ထားတယ်။ ရိုးရိုး မှန်ကြည် စက္ကူ ရောင်စုံ လေး တွေ ကို..ပတ် ၀ိုင်း ပြီး..ကော် နဲ့ကပ် လိုက်တော့.. ကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့..မီးပုံး လေး တွေ ဖြစ်လာပါ ရော။ ဆိုင်က ၀ယ် ရတဲ့..ဂျပန် မီးပုံး လှလှ လေး တွေ ကိုတော့..သေတ္တာထဲ က..သေသေချာချာ ထုတ်ပြီး..အမြင့် ဆုံး နေရာ မှာ..ထွန်းရ တယ်။ လေး ငါး ဆယ်ခု ပဲ ရှိတာ ဆိုတော့.. မီးမကျွမ်းအောင်..အမြဲ ဂရုစိုက် ကြည့် နေ ရ တတ်တာမျိုး။ အဲဒါ နဲ့ မှ..အားမရ သေးရင်.. ပို နေတဲ့ ရွှံ တွေကို..လက်ဝါး လောက် အပြားထူထူ ကြီး လုပ်.. ဗန်ဒါ ရွက် နုနု လေး တွေ ခူး ပြီး..အရွက် ချင်း ယှက် ပြီး..အရိုးညှာလေးတွေ..ထောင်စိုက် လိုက် တော့.. သဘာဝ မီးပုံးလေး တွေ..လှမှလှ။
အိမ်ရှေ့ လမ်းပေါ် တက်ပြီး..ကိုယ့် အိမ်ကို ပြန် ငေး ပြီး မီးအလှ ကြည့် ရတာ လည်း..အမော။ ပြီးရင်..ကလေး တွေရော..ကလေး မဟုတ်..လူကြီးမဟုတ်တွေရော..စက်ဘီး စီးပြီး..တသိုက်ကြီး.. မြို့ကို ပတ်။ အမျိုးတွေ ကို လိုက် ကန်တော့။ မုန့်ဘိုး တောင်း။ တခါတလေ..ကိုယ် ကန်တော့တဲ့ မုန့်ကို..ကိုယ် တွေပဲ ပြန်ကျွေးလိုက် ရင်.. လောက်တောင် မလောက်။ ဟိုး..အဘိုး နဲ့ အဘွား ရှိ တုန်းက ဆို..သူတို့ စာသင် ပေးခဲ့တဲ့..ရွာ ၃ ရွာက..ရွာလုံးကျွတ်..လှည်းကြီး တွေ နဲ့..လာကန်တော့တာ။ ခုနေ ပြန်ပြော ရင်..ယုံကြမှာ တောင် မဟုတ်ဘူး။ တလမ်းလုံး အပြည့် လှည်းကြီး တွေ..တန်းစီ ပြီး ..ကန်တော့ဖို့ စောင့်ကြ ရ တာ။ အဲဒီ သီတင်းကျွတ် ကန်တော့တဲ့..စပါးတွေ ဆိုတာ..အဘွားတို့..တနှစ်လုံး စားလို့တောင် မကုန်။ မုန့်ဖက်ထုပ် ဆိုတာ..တင်းတောင်းကြီး တွေနဲ့။ သူတို့ ကလေး တွေက.. ဘယ်လို စားလည်း ဆိုတော့.. ဖက် ကိုဖြေ..အလယ်က..ပဲ အနှစ်..သကြား အနှစ်တွေပဲ စားပြီး...မုန့်သား အဖြူ တွေကို..ဒီအတိုင်း..လွှင့်ပစ်တာပဲ။ အဲဒီလို ဂါရ၀ တရားတွေ..နွေး ထွေး တဲ့ ..ဆက်ဆံမူတွေ.. ရက်ရော တဲ့ ကြည်ဖြူမူ တွေ ကို.. သတိ ရ လိုက်ပါဘိတော့။
ပျော်ရွှင် လွတ်လပ် တဲ့ ကလေး ဘ၀ သီတင်းကျွတ် တွေ ပြီးတော့..ရန်ခုန် ကြည်နူး ရတဲ့.. ဆယ်ကျော်သက် သီတင်းကျွတ်တွေ လည်း..ထို နည်း ၄င်း ပါပဲ။ နဲနဲ လေး ပိုတာက..သီတင်းကျွတ်မှာ..ပြန်ပြန်လာကြတဲ့.. အဝေးရောက်နေတဲ့ မိသားစု တွေ..အထူး သဖြင့်..အထက ကျောင်းကြီးက..အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ ကို ပြန်လာတဲ့..ဖေဖေ တို့ မေမေ တို့ မိတ်ဆွေ..သူငယ်ချင်းတွေ..။ သူတို့နဲ့ အတူ ပါလာ တတ်တဲ့..ရွယ်တူ ကောင်လေး..ကောင်မလေး တွေ..။ ဘုရားပွဲ တော်ရက် က..လာတဲ့ ရန်ကုန်သားတွေ ကို ကြည့်မရ ပေမဲ့..သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ရက် မှာ ရောက်လာ ကြတဲ့..ဧည့်သည် တော်လေး များကတော့.. စိတ်ကူးယဉ်စရာ လေး တွေပေါ့။း)
ဖုန်ထူမြို့ကလေး ကို ကျောပေး ရပ်နေခဲ့တဲ့..စူပုပ်ပုပ် ကောင်မလေး တယောက်ကတော့.. သီတင်းကျွတ်ပေါင်း များစွာ ကို.. ကျော်ဖြတ်လို့.. အပြုံးတု တွေ တောင်..ကောင်းကောင်း အသုံးချ တတ် နေ ပေပြီ။ မဝေးသေးတဲ့ အချိန်တခုက တောင်.. အပြုံးတု တချို့ အိမ်ပြန်လက်ဆောင်သယ်သွားရင်း ...ဖုန်နံ့လေး တွေ ပြန်လည် ရှု ရှိုက် ဖြစ်ခဲ့ တဲ့.. သီတင်းကျွတ်ကလေး တခု ကို ..သတိ ရနေ မိ သေးသည်။ ကိုယ် တိုင် က တော့..ဧည့်သည် တော်ကြီး ဖြစ်နေခဲ့ပြီ လေ။
လမ်းလေး ထဲမှာ..တချို့လူသစ်တွေ ကို မသိတော့.. ကလေးတွေ ကလည်း.. ကြီးတာ မြန်လိုက် ကြတာ..။ အိမ်ပေါ် ထပ်က..သေတ္တာတွေ ထဲမှာ..ငယ်ငယ်က..ချိုးခဲ့တဲ့..ရောင်စုံ မီးပုံး အကြည်လေး တွေ ကတော့..ကော်တွေနဲ့မို့..ပိုးကိုက် ကုန်ပြီပေါ့။ အစဉ် အဆက် သိမ်းထား ခဲ့တဲ့..ဂျပန် မီးပုံးလေး တွေ တော့..ရှိနေသေးသည်။ ဒါပေမဲ့..တရုတ် လျှပ်စစ် မီးကြိုး ရောင်စုံ လေး တွေက..ပို မလှလား..ပိုမလွယ်လား..။ အသီးလေး တွေ..အရွက်ကလေး တွေ နဲ့။ အိမ်ပုံလေးတွေ.. စန်တာကလေ့ ပုံလေး တွေ..စုံ----- လို့။
မုန့်ဖက်ထုတ် တထုတ် ဖြေစား ကြည့် တော့.. သကြား တွေ နဲသွားသလိုပဲ။ စားလို့ လည်း သိပ် မကောင်းတော့ ပေမဲ့..လွှင့်တော့..မပြစ် ရက်။ အိမ်ရှေ့လမ်း ပေါ် မှာတော့..တူတွေတူမတွေရော..တခြား ကလေး တွေရော..ဗျောက်အိုး တွေ..အသားကုန် ဖောက်နေ ကြသည်။ တော်ကြပါတော့ကွယ်..နားတွေ တောင်..အူနေပြီ။ နဲနဲပါးပါး လည်း မဟုတ်..။ မီးရှူးတွေက လည်း အမျိုးစုံ။ သူတို့ကို ရပ်ကြည့် နေတုန်း ..ရှူးကနဲ..ဖြစ် သွားတဲ့..ဗျောက်အိုး အသေ တခုကို..တူမောင်က..အားမလို အားမရ ကြည့်ရင်း..` အဲဒီ အနီပတ် နဲ့ဟာက..မှားဝယ်လာမိတာ..မကောင်းဘူး..တရုတ် ဗျောက်အိုးကမှ..အကျယ်ကြီး ပေါက်တာ ကွ.. ´ ဆိုပဲ။
လမ်း လေး ထဲ မှာတော့..တချို့အိမ်လေး တွေ လည်း..ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း မီးထွန်း လို့.. တချို့အိမ် တွေ ကတော့..လှလှ ပပ ဆန်းဆန်းပြားပြား .. တချို့ အိမ် တွေကတော့.. ဘာမီး မှတောင်..မလင်း ။ လမ်းထဲက..ဆွမ်းရုံလေး မှာ..သီတင်းကျွတ် ဆွမ်းလောင်းဖို့.. ချက်ပြုတ် ထုပ်ပိုး နေကြတဲ့..ငယ်ပေါင်း ကြီးဖော်..လမ်းသူလမ်းသား တွေ ။ သူငယ်ငယ် က..ချီပိုး ထိန်းကျောင်းခဲ့တဲ့..မ--- တို့ ညီအမ အပျို ကြီး တသိုက် လည်း..ကြည့်ပါ ဦးတော့။ ဆံပင် တွေ ဖြူ ကုန်ပြီ ။ ဒါပေမဲ့..အရင် အတိုင်း.. ပျော်တတ်..အော်တတ်..ကူညီ တတ် တုန်း။
` ဟေး....လာ ဟေ့.. အမယ် ---- ကြီးက တကယ့် လူကြီး- ကြီး ကို ဖြစ်လို့..ခုည.. ကြက်သား ဆန်ပြုတ် ... လာ..လာ.. ကြက်သွန် ကူ နွှာ.. ´
`ဟယ့်..နင်က..အခု ဘယ်မှာ..´ လို့ မေးလာတဲ့..စပ်စု တတ်တဲ့..ဟို လမ်းထိပ် အိမ် က..အမ ကြီး ကလည်း..ပါးစပ် အဟောင်းသား နဲ့။ ဒီ လမ်းသား မဟုတ်တဲ့..ဘယ်က မှန်း မသိ တဲ့..လူကြီး တယောက် ကတော့.. ဘာမှန်း မသိ..ညာမှန်း မသိ..` အော်- နေပြည်တော် ရောက်နေတာလား..´ တဲ့။ ကဲ- မှတ်ကရော။
ဘာပဲ ပြောပြော..နွေးထွေးမူ တွေ ကတော့.. အရင် အတိုင်း ပါပဲ။ ခင်မင် မူတွေ လည်း..ဒီ အတိုင်း မပြောင်းလဲ..။ ပြောင်း လဲ နေတာက..ပြက္ခဒိန် တွေ ..။
ခု- သူ့ရှေ့ က.. ပြက္ခဒိန် မှာ.. ပြသာဒါး ရက်ရာဇာ မပါ။ ဝေနေယျသုခ..ရေချမ်းစင် တံဆိပ် မရှိ။ ဒီနေ့..Tuesday, 14 October လို့ပဲ ပြ ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့..သူ သိပါတ ယ်။ ဒီနေ့.. သီတင်းကျွတ် လပြည့် ၁၅ ရက်။ ဥပုပ် အခါတော် နေ့။ ဂေါတမ မြတ်စွာ...နတ်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ မယ်တော်ကို.. တရားဦး ဟော ပြီး..လူ့ပြည် ကို ပြန်ကြွ လာတဲ့ နေ့။ ကလေး တယောက် ပျော်ရွှင် ခဲ့တဲ့ နေ့။ ကောင်မလေး တယောက်.. မီးပုံး လှလှ လေး တွေ ချိတ် ခဲ့တဲ့ နေ့။ မိန်းကလေး တယောက်..မိဘ ဆီ ပြန်လာ လည် တဲ့နေ့။ အမျိုးသမီး တယောက်.. ငေးမော သတိ ရ နေတဲ့..နေ့။
Labels: Burma story , cartoons , Family , personal
အမျိုးသမီး တယောက်.. ငေးမော သတိ ရ နေတဲ့..နေ့။
စိတ်မကောင်းအောင် မလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ်.ဘာသာ ကို မေ့မေ့ပျောက် ပျောက် နေနေ တာ။ ဝမ်းနည်းလြာ့ပီ ။
October 14, 2008 at 3:28 PM
ကျွန်တော်လည်း သီတင်းကျွတ်ကိုလွမ်းနေမိတယ်... ငယ်ငယ်က မိဘ လူကြီးတွေ ကို မုန့်မျိုးစုံနဲ့ ကန်တော့ ... လူကြီးတွေက မုန့်ဖိုးပြန်ပေး... မီးပုံးလေးတွေ နဲ့ကစား.. ပွဲဈေးတန်းသွားမုန့်ဝယ်စား...
October 14, 2008 at 3:49 PM
မိန်း ခလေး တစ် ယောက် မိ ဘ ဆီ ပြန် လာ တဲ့နေ့ ....????
အဲ ဒီ လို နေ့တွေ ကို အ မြဲ တမ်းပျော် ရွှင် စွာ ပို င် ဆိုင် နိူင် ကြ ပါ စေ.....!!!!
ကျွန် တော် ပြန် ခဲ့ရ တဲ့ပြီး ခဲ့တဲ့လ ရဲ့နေ့တစ် နေ့မှာ တော့ကျွန် တော့်ဘ ၀ ရဲ့ မေ မေ ဆုံးသွား ခဲ့တယ်........!
October 14, 2008 at 4:13 PM
အမအဲလိုမျိုးလေးရေးတော့ ကျွန်တော်တောင် သတိရလာပြီဗျာ... ။ ပြန်ချင်တယ်ဗျ..။
အမကေ ပို့စ်လေးဖတ်ရင်း အတူတူလာလွမ်းသွားပါတယ်
သီတင်းကျွတ်အလွမ်းစာအတွက် ကျေးဇူးတင်ရင်း ဂါရဝပြုသွားပါတယ်။
ကေရေ… အမျိုးသမီးတယောက် အလွမ်းကို အမျိုးသမီးတယောက်က မျှဝေလွမ်းသွားတယ်… မနှစ်က ဒီလိုအချိန် ဒီအမျိုးသမီးလဲ ဖုန်ထူထူမြို့ လေးက ခြောက်ကပ်ကပ် သီတင်းကျွတ်ရက်လေးတွေကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်… ဒီနှစ်တော့ လွမ်းရုံသာ တတ်နိုင်တော့တာပေါ့လေ… နောင်နှစ်ကျရင်ကော….
October 14, 2008 at 11:38 PM
October 15, 2008 at 1:18 AM
လွမ်းနေပါတယ်ဆိုမှ ......း(
October 15, 2008 at 6:51 AM
“လွမ်းတာကို နာတာနဲ့ ဖြေ” တဲ့။
October 16, 2008 at 3:02 AM
မနော်ရေ- လွမ်းတယ် ဆိုတာ..ဝေးမှ ဟုတ်ဘူးလား။း)
ငေးမော..လွမ်းဆွတ် ကုန်တယ် ဆိုတဲ့..မြတ်နိုး..မခင်ဦးမေ..ကိုပီတိ- ဂစ်တာ-မဇနိ- မတန်ခူး-ပေါက်- တောင်ငူ- ဘယ်နှယ်ရက် လွမ်း မှာ ပါ လိမ့် ။း) ဒါနဲ့ တောင်ငူရေ- ဂါရ၀ တော့ မပြု ပါနဲ့အုံး။ စောသေးတယ်..အဟဲ။
အမည်မသိရေးသား တဲ့- ကို----- အတွက်လည်း.. စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ.. အကြောင်းတွေက..မတိုက်ဆိုင် တတ်သလို..တိုက်ဆိုင်တာတွေ လည်း ရှိအုံးမှာပါ့။ စာလာဖတ်တဲ့ အတွက်..၀မ်းသာပါတယ်။ ခင်မင်လျက်-
မချိုသင်း ကိုအောင်သာငယ် နဲ့ ကိုသက်ဦး -
ကွန်မန့်တွေက..တို လို့.. ပြန်မဖြေ တော့ဘူး။း) နောက်တခါ ရှည်ရှည်ရေး-
မနှစ်ကစာလေး ပြန်ဖတ်တော့လဲ လွမ်းတုန်း၊ ပြန်ချင်တုန်းပဲ။
October 4, 2009 at 12:29 PM
နှလုံးသား နဲ့ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး
ဟီလာရီ ကလင်တန် ရဲ့ Hard Choice စာအုပ်က ၊ အာရှပစိဖိတ် နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရှေ့ဖက် အခန်းတွေ ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ အခါ ၊ ခဏ နားရင်း ၊ စာအုပ်ထဲမှာပါ...
သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား စိုးထွန်း
ဘာလင် တံတိုင်းပေါ်က အယူဝါဒ သစ်ပင်များ
ပြုံးပြီး လွမ်းရတဲ့ စာအုပ်ကလေး တအုပ်
စာစီစာကုံး ( သို့ ) သွေဖယ်တတ် သည့် ခေါင်းစဉ်
သူ့ဦးဏှောက်ထဲက ဖိနပ် . . သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အပ်
အတိတ်ကို ပြန်တွေးလို့ ရာဇ၀င်သာ အသစ်ပြင်ရေး
We Will Cross the Road
စတစ်ဂလဇ် နှင့် လက်ငါးချောင်း
အတွေးရသ ရသအတွေး (ပေါ်သစ်)
အိပ်မက်တွေစီးပြီး သွားတဲ့ ခရီး
၁၃၀၀ပြည့်အရေးတော်ပုံက စလို့ မန်ဒဲလားသေတဲ့နေ့အထိ
သယံဇာတ ပဋိပက္ခ နဲ့ သယဇာတ ပဋိညာဉ်
တို့ဗမာပြည်ကို တိုင်းရင်းသာကုန်စင် တို့ပြည်လို့မှတ်ထင်
ငါတို့တွေဟာ ၉၉ ရာနှုန်း
တယောက်မှ မကြိုက်ရင် ၂၀ ပေးရတဲ့ အော်ဇီ ရွေးကောက်ပွဲ
အမျိုးသားသယံဇာတအကျိုးစီးပွား နဲ့ M2
The Blogger and The Artist
တူ-တံစဉ် လူထု နဲ့ တန်ဖိုးနည်းဒီမိုကရေစီ
နတ်သျှင်နောင် မျေက်မှဆင်းသက်၍ ဗရင်ဂျီဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့သလား
ဗမာပညာတတ်များ နဲ့ စင်ဒရဲလားအတွက် ဖိနပ်တဖက်
မြန်မာပြည်သစ်မှာ ရေးခြစ်စရာ ရှာမရသေးဘူး
နွေဦးမှာ စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်
အခမ်းနားဆုံး နဲ့ အနုနယ်ဆုံးလွှတ်တော်ကြီးအကြောင်း တစေ့တစောင်း
ပြောင်းလဲဖို့အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အရာ
အမျှဝေရတော့မလား ၀င်းမော်ဦး
ဟီရိုရှီးမား( ၀င်းတင် -ဗမာပြန်)
ရသ နဲ့သုတ- နည်းပညာ နဲ့သဘာဝ - အဟောင်းနဲ့အသစ်- ယခု နဲ့ယခင်
တောင်ပေါ်မြေရဲ့ အခြားတဖက် မျက်နှာမှ..
The Moon Princess ရဲ့ စာမျက်နှာ အပိုင်းအစများ
My Flower..My Color..My Pleasure
Dr Gordon Seagrave
ယူနီ…တူညီ .. မူအတည်ဖြစ်ဖို့…
ပန်းခင်း ( for blog day)
တို့ ပြည်ထောင်စု လူထု ရေ..
နန္ဒာသိန်းဇံ.....နောင်တ ကင်းရာ သို့
ငှက် တွေ အကြောင်း ဓမ္မဓိဌါန်
Universal Mass Distraction
ကိုကြီးကျောက် ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ပါစေ
Meditation for Relief
ဂီတမိုးကောင်းကင် အောက် က .. ဂီတ မိတ်ဆုံ
ဖေဖော်ဝါရီထဲမှာ လွတ်သွားတဲ့ ငါ
လက်နဲ့ ယက်တဲ့ ကွန်ယက်
Merry Christmas is Merry Christmas
ကာတွန်းတွေ နဲ့ တွန်းကာ တိုက်ကာ
ပန်နီပေးတဲ့ အမျိုးသားနေ့ ပင်နီဝေးတဲ့ အမျိုးသားနေ့ (ပြန်လည်)
မျက်နှာပုံရိပ် နဲ့ ကွန်ယက်နိုင်ငံရေး
နဂါးကြီး ရဲ့ ပထ၀ီ နိုင်ငံရေး
အနှစ်နှစ်ဆယ်-ဗမာ့စောင်း-အိုင်ဝိုဂျီးမား နှင့် ဂျပန်စစ်ပြန်ကြီးများ
နှင်းပွင့်လေး နှင့် သူငယ်ချင်းများ
ဗိုလ်မှူးချစ်ကောင်း ရဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်
ငါးခေါင်းဟင်း-ဘဲအရိုးပျောက်အစာသွပ် နဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်
ရွေးကောက်ပွဲ တော့ ရွေးကောက်ပွဲ
88 22 2010 1010101010101010
သူ - အကျင့်မကောင်းပုံ
ရေးခဲ့ဖူးသော ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းစဉ်များ
ကမ္ဘာနှစ်ခုကြားက ရတနာ နတ်မယ်
အတာ - အတက်
ရထားလေးတစင်းနဲ့ ( အတူ )
Mogkok Blues( Repeat)
ပြည်သူမပိုင်သောပြည်သူပိုင် နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများပိုင်သော ပုဂ္ဂလိကပိုင်
စိန်ပန်း နဲ့ ကံ့ကော် (E-book)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်( အပြီး)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၂၀)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၁၉ )
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၁၈)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၁၇)
Me Generation ( Repeat by Cause )
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၁၆)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၁၅)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၁၄)
မျိုချ ( ကဗျာ)
ပန်းနဲ့သီချင်း (သို့) တက္ကသိုလ်သီချင်းများ (၂)
စိန်ပန်း နဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၁၃)
၄၇ နှစ်မြောက် မင်းကိုနိုင် မှသည်..
စိန်ပန်း နဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၁၂)
စိန်ပန်း နဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၁၁)
စိန်ပန်း နဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၁၀)
စိန်ပန်း နဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၉)
စိန်ပန်း နဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၈)
စိန်ပန်း နဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၇)
စိန်ပန်း နဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၆)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၅)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၄)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၃)
စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်(၂)
ဂီတကို ကဗျာမူ ပြု၍-ဘ၀ကို အချစ်နှင့် ၀င်စားသူ
Scenery of Switzerland(2) (photo)
Scenery of Switzerland(1) (photo)
Clint Eastwood ရဲ့ရုပ်ရှင်နှစ်ကား
အအေးပတ်ခြင်း-မြင်တွေ့ခဲ့ရသူများ နှင့် မွေးနေ့၆၄
Postcards from Davos
Dust and Sweat
ဗမာပညာတတ်များ နဲ့ စင်ဒရဲလားအတွက်ဖိနပ်တဖက်
ဗမာ့စာပေ နဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်
၂၁ ဗားရှင်း ကျမ်းစာ
Facebook (သို့) ပုံရိပ်ယောင် နိုင်ငံတော်
Just simply gloomy
DNC (or) Political StageShow
တီဗွီထဲက အိုလံပစ်-အတွေးထဲက အိုလံပစ်
ME Generation နောက်ဆက်တွဲ
International Blogger Day for Free Burma
ရုရှ မှ အသံ
Burma Democracy Supportors from Norway
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ် ကျတဲ့ မျက်ရည်မိုး
အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မိုးကုတ်မြို့
Free Education vs Education Free
အမြဲရှင်သန်နေသော တော်လှန်ရေး ရက်ဂေးသီချင်းများ
နှလုံးသားယိုစီးမူ (သို့) အမျိုးသားရေး အရေပျော်မှတ်
ပြုံးခဲ့ရ တဲ့ ရှစ်လေးလုံး
19th Memorial of 8888
Hip Hop ခေတ်ရဲ့ ၁၉ ဇူလိုင်
07-07-07 သို့ သမိုင်းအပိုင်းအစများ
ကျိုက်ထီးရိုး ကို ရောက်ခဲ့တယ်
စာ < ကဗျာ < သီချင်း< ပန်းချီ
သတိတရပုံရိပ်များ နှင့် မွေးနေ့ဆုတောင်း
ပညာ နဲ့ ညဏ်
started my sharing
Archive February ( 1 ) June ( 1 ) May ( 1 ) September ( 1 ) July ( 1 ) February (2) December ( 1 ) October ( 1 ) September ( 1 ) August ( 1 ) June ( 1 ) May (2) April (3) March ( 1 ) January (2) December ( 1 ) November (2) September (4) August (2) July (3) June (3) May (2) April ( 1 ) March (4) December ( 1 ) November ( 1 ) October (4) August (5) July (2) April ( 1 ) March (2) February (3) January (2) December (2) November (3) October (4) September ( 8 ) August (6) July (3) June (2) May ( 10 ) April (6) March (5) February (5) January (3) December (4) November (3) October (5) September (4) August (6) July (3) June ( 1 ) May (6) April (5) March (5) February (5) January (7) December ( 8 ) November (6) October (9) September ( 10 ) August ( 16 ) July ( 10 ) June (5) May (3) April (3) March (6) February (9) January ( 10 ) December ( 11 ) November ( 8 ) October ( 10 ) September ( 10 ) August (9) July ( 8 ) June (7) May (5) April (9) March (6) February ( 12 ) January ( 12 ) December (9) November (6) October ( 11 ) September ( 14 ) August ( 8 ) July (7) June (9) May (2) April (2)
friends ( 74 )
personal ( 67 )
poems ( 66 )
Burma story ( 50 )
short story ( 44 )
bits of thought ( 39 )
Family ( 38 )
People ( 34 )
Burma History ( 30 )
Free Burma ( 30 )
Photos ( 30 )
Blogging ( 23 )
Opnion ( 23 )
Printed ( 23 )
musics ( 21 )
Travel ( 18 )
Movies ( 13 )
မိတေဖိုး ( 13 )
Inspiration ( 12 )
International ( 12 )
Things to Ponder ( 11 )
Sharing In ( 8 )
cartoons ( 8 )
Aung San Suu Kyi (7)
fun (6)
Foods (5)
Sarcasms (5)
U Win Tin (5)
နီဇူလိုင် (5)
Celebes (4)
surreal (4)
် ( 1 )
blogspot ပိတ်ထားသောနေရာများတွင် ဤလိပ်စာမှ ဖတ်၍လည်း ရပါသည်။
blogspot ပိတ်ထားသော နေရများအတွက် e-mail နှင့်ယူဖတ်လျှင် အဆင်ပြေပါသည်